Mpanamboatra sy mpamatsy aretina Gastroenterite - Orinasa Gastroenteritika Shina
Fampiasana INTENDED Ny StrongStep® Adenovirus Rapid Test Device (Feces) dia immunoassay haingana amin'ny fahitana ny adenovirus amin'ny fecal olombelona. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny famaritana ny aretina adenovirus. FAMPIDIRANA Ny adenovirus enteric, indrindra ny Ad40 sy Ad41, dia antony iray mahatonga ny fivalanan'ny zaza maro voan'ny aretim-pivalanana mahery, faharoa amin'ny rotavirus. Ny aretim-pivalanana mahery vaika no antony lehibe mahatonga ny fahafatesan'ny ...
Fampiasana an-tsoroka The StrongStep® Giardia lamblia Antigen Rapid Test Device (Feces) dia immunoassay haingana amin'ny maso ho an'ny fikarohana qualitative, presumptive ny Giardia lamblia amin'ny santionan'ny taolam-paty. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny famaritana ny aretina Giardia lamblia. FANAMBARANA Ny aretina parasy dia mijanona ho olana ara-pahasalamana lehibe tokoa manerantany. Giardia lamblia no protozoa mahazatra fantatra fa tompon'andraikitra amin'ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny fivalanana mafy amin'ny olombelona, ​​...
Fitsapana Antigen H. pylori
StrongStep® H. pylori Antigen Rapid Test dia immunoassay haingana amin'ny fahitana ho an'ny qualitative, presumptive detection of Helicobacter pylori antigen with fecal human as specimen.
FAMPIDIRANA Rotavirus no maso matetika tompon'andraikitra amin'ny gastroenteritis maranitra, indrindra amin'ny ankizy kely. Ny nahitana azy tamin'ny 1973 sy ny fifandraisany amin'ny gastro-enteritis zaza dia naneho fandrosoana tena lehibe tamin'ny fandalinana gastroenteritis tsy ateraky ny aretina mikraoba mahery vaika. Rotavirus dia ampitaina amin'ny alàlan'ny zotra oral-fecal miaraka amin'ny fe-potoana fampidirana anaty 1-3 andro. Na dia ny santionany voaangona ao anatin'ny andro faharoa sy fahadimy amin'ny aretina aza dia mety amin'ny antigène detio ...
Soa azo avy amin'ny fahatsapana avo lenta (89.8%), ny fahaiza-manaony (96,3%) dia voaporofo tamin'ny alàlan'ny fitsapana ara-pitsaboana 1047 niaraka tamin'ny fifanarahana 93,6% raha oharina amin'ny fomba kolontsaina. Fomba dingana mora tanterahina, tsy mila fahaizana manokana. Hainganana ihany 10 minitra takiana. Fitehirizana ny hafanan'ny efitrano Famaritana ny fahatsapana 89,8% Fahamarinana 96,3% Fahamarinana 93,6% CE voamarika Kit Size = fitsapana 20 File: Boky torolàlana / MSDS FANAMBARANA Salmonella dia bakteria iray izay miteraka iray amin'ireo otrikaretina enterika (tsinay) fahita indrindra amin'ny kankana ...
FANAMBARANA Ny valanaretina kôlera, ateraky ny serasera V.cholerae O1, dia mitohy aretina manandanja misy dikany lehibe manerantany amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana. Amin'ny klinika, ny kôlera dia mety manomboka amin'ny fanjanahana asymptomatika ka hatramin'ny fivalanana mahery vaika miaraka amin'ny fahaverezan'ny tsiranoka goavambe, mitarika tsy fahampian'ny rano, fikorontanan'ny electrolyte ary fahafatesana. V. cholerae O1 dia miteraka fivalanana miafina amin'ny alàlan'ny fanjanahana ny tsinay kely sy ny famokarana poizina cholera mahery vaika, Noho ny klinika sy ny epidemiolojika ...
Fitsapana Vibrio cholerae O1-O139
FANAMBARANA Ny valanaretina kôlera, ateraky ny serasera V.cholerae O1 sy O139, dia manohy aretina manimba eo amin'ny firenena mandroso maro. Amin'ny klinika, ny kôlera dia mety manomboka amin'ny fanjanahana asymptomatika ka hatramin'ny fivalanana mahery vaika miaraka amin'ny fahaverezan'ny tsiranoka goavambe, mitarika tsy fahampian'ny rano, fikorontanan'ny electrolyte ary fahafatesana. V. cholerae O1 / O139 dia miteraka fivalanana miafina amin'ny alàlan'ny fanjanahana ny tsinay kely sy ny famokarana poizina cholera mahery vaika, Noho ny klinika sy ...
The StrongStep®H. pylori Antibody Rapid Test Device (Whole Blood / Serum / Plasma) dia immunoassay haingana amin'ny maso ho an'ny famaritana mialoha ny antimody IgM sy IgG manokana ho an'ny Helicobacter pylori amin'ny ra, serum, na santionan'ny plasma iray manontolo. Ity kit ity dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny famaritana ny aretina H. pylori.
Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana,